Xildhibaandii mooshinka ka gudbiyay Md Farmaajo oo war saxaafadeed soo saaray • Horseed Media
You are here: Home / Somali News / Federal Republic of Somalia / Xildhibaandii mooshinka ka gudbiyay Md Farmaajo oo war saxaafadeed soo saaray
Kulan ay maanta xarunta Baarlamaanka Vila Hargaysa ee magaalada Muqdisho ku yeesheen xildhibaanadii mooshinka ka gudbiyay madaxweynaha Soomaaliya ayaa waxa ay uga hadleen arimo la xiriira xaalada gudoomiyaha golaha shacabka iyo warkii kasoo baxay maanta xoghayaha golaha shacabka.
Waxa ay sheegeen in weli uu jiro mooshinkii ay ka gudbiyeen madaxweyne Farmaajo isla markaana uusan jirin buritaan ku yimid mooshinka xili xogahayaha golaha shacabka Cabdikariin Xaaji Buux uu maanta soo saaray warqad uu ku sheegay in uu buray mooshinkii ka yaalay madaxweyne Farmaajo.
Kulanka kadib xildhibaanada ayaa soo saaray warsaxaafadeedkan
Waxay xildhibaano metelaya shacabka iyo deegaanka laga soo doortay ay ayagoo gudanaya waajibaadkooda keenneen soo jeedin sharci ah oo uu qabtay Guddoomiyaha Golaha Shacabka Mudane Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan. Madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo haddii uu aqoonsan yahay baarlamaamkii doortay iyo dastuurkii uu ku dhaartay awooddana siiyay, wuxuu kuqasbanaa in uu maro waddo sharci ah baarlamaankana u hoggaansamo. Beddelkeeda madaxweynaha wuxuu u dhaqmaqmayaa mas’uuliyad darro:
1-Waxaa la xanibay Guddoomiyaha Golaha Shacabka, looma geli karo oo xataa xildhibaanadii waa loo diidey
2.Waxaa laga hadashiinayaa xildhibaanno aanan aslanba mooshinka saxiixin, iyo qaar aamusnaa illaa mooshinka lagasaaro shaabadda, Guddoonkana uu qabto, Sida sharciga ah mooshin la qabtay kaddib xildhibaanka ra’yigiisa haddii uu is beddelo waxaa u furan cod.
Waxaa lasoo saaray warqad uu ku saxiixan yahay Buux oo oo la yiri mooshinka waa jabay si buuq loo abuuro. Haddii aysan xusuustooda yareyn, isla Buux ayaa March 14, 2018 wuxuu shir jaraa’id la qabtay Guddoomiye Jawaari oo mooshin ka yaallay asagoo yiri xildhibaanno badan ayaa ka noqday, wuuna jabay. Mooshinkii inuu jabay Guddoomiye Muudey wuu diiday, sidiina Jawaari isku casilay. Buux ma aha xildhibaan, shalay warkiisa Guddoomiye Muudey oo mooshinka hayay iyo xildhibaanada ayaa diidday, maantana waa sidoo kale. Shalay iyo maanta Buux ma kala aha.
Inta mooshinka xilka-qaadista ee xildhibaanadu soo gudbiyeen Barlamaanku uga codaynayaan in uusan sameyn karin qodobada soo socda:
In wax heshiis ah uusan geli karin.
In uusan qofna magacaabi karin xilna ka qaadi karin.
In uusan dalka ka bixi karin inta dacwadaadu dhinac uga dhacayso.